Nosy 20 ambony indrindra eran-tany - Victor Mochere
Ny sombin-tany rehetra izay voahodidin'ny rano dia antsoina hoe nosy na nosy. Noho izany, ny nosy dia kely kokoa noho ny kaontinanta ary voahodidin'ny rano tanteraka. Na dia niforona voajanahary aza ny ankamaroan'ny nosy, ny hafa nosy namboarina, namboarin'olona. Ny nosy dia miseho any amin'ny renirano sy farihy, na dia ny nosy lehibe indrindra aza dia hita any amin'ny ranomasina na ranomasina. Ireo nosy ireo dia samy hafa amin'ny habe, endrika, zavamaniry, toetrandro, toetrandro ary jeografia. Ny fizahana ny isan'ny nosy eto an-tany dia mety ho dingana sarotra, satria tsy ny nosy rehetra no hita. Ity lahatsoratra ity dia mitana ny nosy amin'ny toerana avo indrindra.
Ireto ny nosy 20 ambony indrindra eto an-tany.
Nosy 20 lehibe indrindra eto an-tany